China Capsule tavoahangy HDPE CFB-25 orinasa sy mpanamboatra | Qianduo fonosana
Tavoahangy plastika Capsule endrika ivelany amin'ny tavoahangy HDPE mpitsabo dia boribory, toradroa ary boribory lavalava. Ny fampiharana ny vatan'ny tavoahangy boribory no lehibe indrindra, indrindra ho an'ny vatana tavoahangy manana 15ml ka hatramin'ny 200ml. Izy io dia miavaka amin'ny hatevin'ny rindrina fanamiana, ny fahaiza-mandray avo ny angovo misy fiantraikany ivelany, ny vidin'ny famokarana ambany ary ny tahan'ny fampiasana mahomby amin'ny faritra mahomby mandritra ny fitehirizana na ny fitaterana. Ny tavoahangy tavoahangy dia manana tahan'ny fampiasana avo lenta amin'ny faritra mahomby sy fitoniana tsara, saingy mora miovaova endrika.
Tavoahangy plastika Capsule ivelany misy endrika tavoahangy HDPE mpitsabo dia boribory, toradroa ary boribory lavalava. Ny fampiharana ny vatan'ny tavoahangy boribory no lehibe indrindra, indrindra ho an'ny vatan'ny tavoahangy manana 15ml ka hatramin'ny 200ml. Izy io dia miavaka amin'ny hatevin'ny rindrina fanamiana, ny fahaizana mifoka rivotra avy any ivelany, ny vidin'ny famokarana ambany ary ny tahan'ny fampiasana mahomby amin'ny faritra mahomby mandritra ny fitehirizana na ny fitaterana. Ny tavoahangy toradroa dia manana tahan'ny fampiasana avo lenta amin'ny faritra mahomby sy fitoniana tsara, saingy mora mihodina ny endrika. Ny tavoahangy eliptika no be mpampiasa indrindra amin'ny famonosana zava-mahadomelina, fa ampiasaina amin'ny fonosana kosmetika kokoa. Noho ny habetsahan'ny tavoahangy HDPE dia tsara tarehy ny endriny. Izy io dia mety amin'ny famonosana endrika mavesatra amin'ny fanafody, ary ny endriny tavoahangy tavoahangy dia manana ny mampiavaka azy. Ny famolavolana vavan'ny boribory boribory, soroka satroka vozona, vatana tavoahangy ary tavoahangy ambany dia mitombina ary manana toetra vitsivitsy. Voalohany, mba hanamorana ny famahanana mekanika ny takelaka sy ny kapoaka matevina, ny famolavolana ny savaivony amin'ny vavan'ny tavoahangy matetika dia mihevitra ny habetsahan'ny fanafody sy ny toerana sahaza azy. Ny faritra ampitan'ny kofehy amin'ny vozon'ny tavoahangy plastika dia semicircular amin'ny ankapobeny. Avy any ivelany dia kofehy tsara misy tendrony roa izy io. Misy koa kofehy trapezoidal, izay antsoina hoe kofehy tokana. Ny endrika famolavolana ny kofehy visy amin'ny vozon'ny vavan'ny tavoahangy dia miankina indrindra amin'ny fifanarahana tsara amin'ny satrony tavoahangy, satria ny fanoherana ny hamandoana ny fonosana fanafody dia miankina amin'ny fitoviana eo amin'ny vavan'ny tavoahangy sy ny tavoahangy tavoahangy ary ny tery aorian'ny fametahana herinaratra. Ity ny ampahany lehibe hita taratra raha ny fahombiazan'ny famehezana ny vavan'ny tavoahangy dia tsara na tsia. Ny famolavolana tany am-boalohany dia ny fisian'ny gasket famehezana ao anaty satrony tavoahangy ary satroka fanoherana ny halatra no ampiasaina any ivelany. Ity satroka fanoherana ny halatra ity dia afaka manome soritr'aretina simba. Ny firafiny dia indrindra fa misy faribolana misy lavaka kely manodidina ny satrony tavoahangy eo am-pototry ny zipo amin'ny sisiny mba hamoronana tsipika tapaka. Rehefa voahodina ny satroka tavoahangy, satria mihidy mafy ao ambanin'ny peratra boribory eo amin'ny faran'ny farany vavan'ny tavoahangy ny satroka tavoahangy, ny tavoahangy tavoahangy mifamadika dia mety vaky amin'ny tsipika mivalona sy ny peratra fanidiana. Amin'izao fotoana izao, ny vavan'ny tavoahangy plastika dia voaisy tombo-kase amin'ny alàlan'ny fampidirana elektromagnetika miaraka amin'ny gasket aluminium foil, izay manana ny fanamafisana ny hamandoana, ny famehezana ary ny fanoherana halatra amin'ny fotoana iray, noho izany dia tsy ilaina ny mampiasa ny endrika kapila fanoherana ny halatra. Faharoa, avy amin'ny famolavolana ny vozona tavoahangy sy ny soroka tavoahangy HDPE, ny fizarana lavareny ny sombin-tavoahangy dia mampiseho fa ny vozona tavoahangy sy ny soroka tavoahangy dia misy radii arc roa, izay mizara roa avy amin'ilay teboka tangentika. Ny elanelana misy eo amin'ny vozona tavoahangy sy ny tsipika afovoany, ny vodin-tsoroka ary ny tadin'ny arc dia tokony ho isaina, ary ny haavony eo anelanelan'ny vozona tavoahangy sy ny soroka tavoahangy dia tokony ho azo. Ny zava-dehibe manimba ny tanjaky ny soroka tavoahangy dia ny zoro firongatry ny soroka tavoahangy. Rehefa fisaka loatra ny soroka tavoahangy, dia mora mirodana ny vatan'ny tavoahangy. Noho izany, rehefa 10 mm ny halavan'ny soroky tavoahangy, ny zoro amin'ny soroka dia tokony mihoatra ny 15 degre, ary ny hatevin'ny ampahany amin'io dia tsy tokony ho latsaky ny 1 mm, mba hahazoana antoka fa tsy manana tapaka ny soroka mandritra ny dingan'ny fitazonana sy fitahirizana zava-mahadomelina sy fampiasana. Fahatelo, ny vatan'ny tavoahangy HDPE dia vatan-tsolika boribory mandroso. Ny fepetra takiana amin'ny vatan'ny tavoahangy dia ny fanamafisana ny rindrin'ny rindrina. Raha matevina loatra ny rindrin'ny tavoahangy, hitombo ny lanjan'ny vatan-tavoahangy, hitombo ny fanjifana ny akora, hitombo ny fihenjanana anaty ny tavoahangy, ary hitombo koa ny fihenan-tsakafo. Raha manify loatra ny rindrin'ny tavoahangy dia sarotra ny mitsoka bobongolo ary ambany ny tanjaka. -Ny takiana ankapobeny dia ny hatevin'ny rindrin'ny faritra hafa tokony hitovy afa-tsy ny fanamafisana, ny taolan-tehezana ary ny kofehin'ny vavan'ny tavoahangy dia matevina kokoa noho ny an'ny tavoahangy tavoahangy. Mba hanatsarana ny sakana sy ny tanjaky ny tavoahangy plastika, ny hatevin'ny tavoahangy tavoahangy amin'ny ankapobeny dia 1.2-1.5mm. Ny famolavolana ny fanambanin'ny tavoahangy plastika dia mandray ambany sy ambany fisaka misy zorony boribory roa. Ny ambany concave dia midika fa ny fanambanin'ny tavoahangy dia mitrandraka ao anaty tavoahangy hamoronana andohalambo, izay afaka manatsara ny fahaizan'ny tsindry anatiny manohitra ny tavoahangy ary miantoka ny fiorenan'ny tavoahangy. Ny ambany concave dia afaka misoroka ihany koa ny fianjerana plastika ary manao ny hatevin'ny tavoahangy ambany tavoahangy mandritra ny famolavolana koroka. Ny firafitry ny ambany sy ny ambany ambany boribory ambany rafitra dia mety amin'ny tavoahangy be ambany ambany, izay mahazaka tsara kokoa ny tsindry anatiny.
Teo aloha: Capsule tavoahangy PET mavo
Manaraka: Capsule tavoahangy PET fotsy